Guddi Golaha Wakiiladu U Saaray Naaqishaada Soo Jeedinta Madaxweynaha Ee Furashada Ururada Siyaasada Oo Mudanayaasha Soo Hordhigay Shuruudaha Ay Is Bedelka Ku Sameeyeen Xeerka Doorashada | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Guddi hoosaadka Arrimaha gudaha iyo difaaca ee Aqalka Wakiilada Somaliland ayaa maanta golahaa horgeeyay wax ka bedelka xeerka ururada siyaasada ee lifaaqa soo jeedinta furashada ururada siyaasada. Fadhigaa Golaha Wakiilada oo ku qabsoomay hoolka fadhiyada ee
dhismaha Baarlamaanka Somaliland waxa Guddoominayay
Gudoomiyaha C/raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) waxa Mudaneyaasha loo qeybiyay soo jeedinta Gudida arrimaha gudaha iyo xeerka doorashooyinka.
Guddoomiyaha Guddida Arrimaha Gudaha iyo difaaca ee Golaha Wakiilada Siciid Cilmi Rooble, oo ka hadlay fadhigaasi ayaa tafaasiil ka bixiyay soo jeedinta lifaaqa furashada ururada siyaasadda.
Guddoomiyuhu waxa uu ka hadlay waxyaabaha ay isbedelka ku sameeyeen waxaanu tilmaamay inay ka mid yihiin deebaajiga oo ay hoos u dhigeen.
“Dhalinyarada ayaan ka farxinayaaye’e waxa xeerka doorashada ku yaalay in Goleyaasha lagu geli karo 36 jir, waxaanu markaa ku bedelay in dhalinyarada ka qalin jabiyay jaamacadduhu ay hoggaamin karaan xisbiyada, anagoo guddi ahaan da’dii kusoo ururinay 30 jir,”ayuu yidhi Md. Siciid Cilmi Rooble.
Sidoo kale Guddooniyaha Guddida golaha wakiiladu u xilsaaray inay soo naaqishaan lifaaqa wax ka bedelka xeerka Ururada iyo soo jeedinta Madaxweynaha ayaa ka hadlayay deebaajiga laga doonayo ururada siyaasadda, isagoo yidhi “Waxa jiray deebaaji ku qornaa lifaaqa madaxweynaha oo la yidhi halaga qaado ururada cusub ee la furayo deebaajigaasi oo ahaa $25000 kun oo Dollar, Arrintaa Guddi ahaan aad ayaanu uga doodnay waxaana ka dhignay $ 20,000 kun oo Dollar. Waxaan qabaa haddii dadku wax wada yeesho in lacagtaasi shilin shilin loo bixin karo.” Ayuu yidhi gudoomiyaha gudidaa Siciid Cilmi Rooble.
Mar uu ka hadlayay dadka marxaladaha abaabulka ururada siyaasada ka faa’idaysta, isla markaana qaab ganacsi iyo macaash dilaalnimo u furta urur aan hadaf siyaasadeed oo fog lahayn, waxa uu yidhi, “Waxa jira niman Wasiirro doon ah oo inta ay ururo iska furtaan,hadhowna ku baayactama,waxaanu imika meesha ka saaray dilaalistii,”ayuu yidhi Siciid Cilmi Rooble.
Guddida arrimaha Gudaha ee Golaha Wakiiladu waxay soo jeediyeen in la sameeyo guddidii diiwaan gelinta ururada cusub, waxaanay sheegeen in Guddidaasi oo ka kooban 7 xubnood oo 3 ka mid ah Madaxweynuhu soo xulayo, halka 2 xubnoodna ay soo xulayaan wakiiladdu, laba xubnood ee kalena waxa soo xulaya Guurtida.
Guddida arrimaha Guduhu waxay soo jeediyeen in ururada siyaasada la furo 10-kii sanadoodba hal mar si xisbiyadu u kobcaan, taas oo qayb ka ah tala bixintooda gaolaha la hor geeyay maanta. Waxaana la filayaa in soo jeedintaa gudida goluhu u codeeyo inay sidaa ugu gudbiyaan lifaaqa wax ka bedelka xeerka ururada siyaasada iyo xisbiyada ee L/r 14/2000 golaha guurtida iyo inay dood ka yeeshaan mudanayaasha wakiiladu, ama ay qodobada soo jeedinta ee wax ka bedelka lagu sameeyay mid mid loogu codeeyo.